50 taona ny FI.MPI.MA. - Instant Malagasy
50 taona ny FI.MPI.MA.
Par Parfait Partout dans Vaovan'ny kolontsaina le 21 Novembre 2013 à 16:59
1963- 2013, 50 taona katroka ny FIkambanan’ny Mpikabary eto Madagasikara. Fankalazana makotrokotroka no nanehoan’ireo mpikambana ao amin’ity Fikambanan’ny mpikabary ity izany jaobily volamena izany.
Tamin’ny 1 jona no nanomboka tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fikambanan’ny Mpikabary eto Madagasikara. Narehitra tamin’izany ny fanilo manamarika ity taon-jaobily ity. Nitety an’i Madagasikara ny fanilo nanomboka teo tamin’ny alalan’ny Faritany, Sampana sy Rantsana FI.MPI.MA.
Hetsika maro no nokarakarain’ny FI.MPI.MA. hanamarihana ity faha-50 taonany ity. Natomboka teo ivelan’ny Lapan’ny Tananan’Antananarivo izany fankalazana izany ka notarihin’ny Filohan’ny Foibem-pirenen’ny Fikambanana Ramatoa Andriamboavonjy Hanitriniaina Ravaomalala.
Fotoana ihany koa nahafahan’ny FI.MPI.MA. naneho ny fankasitrahany ireo mpikambana mavitrika tao aminy nandritra ny 20 taona. Fanomezana mari-boninahitra moa no niseho tamin’izany ary nahazo izany avokoa ireo mpikambana maro efa ela nihetezana tao amin’ny Fikambanana.
Tao ihany koa ny herinandron’ny kabary izay fotoana iray nahafahana nampiseho ireo ranty maro isan-karazany: vokatra FI.MPI.MA. ireo mpitarika ny Fikambanana, ny tantarany. Tao ihany koa ireo Sampana, Rantsana na mpikambana nametaka fafana mampahafantatra ny tenany manokana.
Ny sabotsy 19 novambra dia nisy teo Antsahamanitra indray ireo mpikabary maro no nanao hetsika: seho miavaka no nasehon’ireo mpikambana FI.MPI.MA. avy any amin’ny faritany rehetra ary tsy latsa-danja tamin’izany ny seho nataon’ireo mpikambana FI.MPI.MA. faritany Antananarivo maherin’ny 80 nandray anjara tamin’ny seho an-tsehatra.
Ny alin’io ihany, dia nitohy ny korana ka teny amin’ny trano fisakafoanana I&C Ivato indray no nifanao fotoana ny mpikambana FI.MPI.MA. hankalaza ny alin’ny Mpikabary. Vorilanona hatrany ny mpikambana tamin’izany ary nakotroka tokoa ny fety.
Miroborobo ny fampianarana kabary sahanin’ny FI.MPI.MA. ary ny tanora no hita fa resy lahatra hianatra ny kabary. “Ho ela velona ny FI.MPI.MA.” araka ny hira fanevan’ny faha-dimampolo taona.
« Ho an'FoRECITES-MOI »
Instant Malagasy - Fabriquer un blog gratuitement sur Eklablog - CGU - Signaler un abus -